सरकारले साथ् दिए नेपालमा नि:शुल्क फोन कल र आधा रेटमा इन्टरनेट दिन आतुर छौँ : सिजी ग्रुप…हेर्नुहोस!::Point Nepal
सरकारले साथ् दिए नेपालमा नि:शुल्क फोन कल र आधा रेटमा इन्टरनेट दिन आतुर छौँ : सिजी ग्रुप…हेर्नुहोस!
उनले अनुमति प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नविकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने बताए । तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लाइसेन्स लिनका लागि अहिले नै २० अर्ब रुपैयाँ मागेकोमा आफुहरु आश्चर्यमा परेको बताए । पछिल्लो समय चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्स र सरकारबीच युनिफाइड टेलिफोन सेवा सम्बन्धी वि-वाद छ । सीजीले नियमअनुसार सबै प्रकृया पुरा गरेर आवेदन दिएको जनाएको छ भने सरकारले सबै प्रकृया पुरा गरेमात्र अनुमति दिने बताउदै आएको छ । साभार : डिसी नेपाल